Ukubhaka Ikati, Maile Ohye Nesibhakela Semfene | Martech Zone
Ukubhaka Ikati, Maile Ohye Nesibhakela Semfene
NgoLwesine, Agasti 23, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Ngisanda kuthola le imeyili:
Ngizwe uDouglas ekhuluma eBlog Indiana ngokuthi kanjani I-SEO ifile namagama asemqoka awasabalulekile njengakuqala. Uqinisekisa kanjani amaklayenti ngempumelelo yalokhu? Ungaba nentshisekelo ekuthatheni kwakho.
Qaphela: Ngenkathi amagama angukhiye engekho as kubalulekile… kusabalulekile ukusebenzisa amagama angukhiye afanele. Sichitha isikhathi esiningi namakhasimende ethu ocwaningweni lwamagama asemqoka. Isilayidi engisabelane nezethameli ukukhombisa ukuthi kufanele usebenzise igama elingukhiye elilungile (nesipelingi) bekuyikati eliqhathaniswayo uma kuqhathaniswa nokuzalaniswa kwekati. Lokhu ikati breading:
Ukwenza amaklayenti aqonde ukuthi ukusetshenziswa kwegama elingukhiye akuyona njengoba kubalulekile kunzima kakhulu. Ngenkathi izinjini zokusesha zishintsha njalo kuma-algorithms azo, izinkampani ziyephuza kakhulu ukwamukela. Ngaphakathi kwemboni ye-SEO, sihlala sibhekile futhi sisebenzisa izinguquko ngokushesha ukuze amaklayenti ethu akwazi ukusesha futhi aqhubeke nomncintiswano. Uma amaklayenti akho engakukholwa, ngincoma amaqhinga ambalwa.
Okokuqala, thatha iseluleko kusuka ku- -Google. UMaile Ohye ungumphathi womkhiqizo wokusesha kwaGoogle futhi uveza amaphutha ajwayelekile abezentengiselwano abawenzayo uma kuziwa ekusebenziseni izinjini. Uzokuqaphela lokho Amagama angukhiye abekho engxoxweni! Amaphutha abawenzayo ukuntuleka kwesiphakamiso senani, akukho ndlela ehlukanisiwe, ukusebenzisa ama-workaround, ukunganaki izitayela ze-SEO nokunciphisa kancane.
Kulungile… IGoogle ikushilo futhi nawe ukusho, kodwa iklayenti lakho alikakholwa. Okulandelayo yi isibhakela senkawu indlela. A isibhakela senkawu ifindo elikhethekile eliboshwe ekugcineni kwentambo. KumaNavy, lapho imikhumbi ifika ihange, wawuphonsa isibhakela senkawu ogwini lapho othile ayengasibamba khona bese edonsa intambo. Ekupheleni kwaleyontambo kwakuyintambo enkulu yokuqinisa. Awukwazanga ukuphonsa intambo enkulu, ngakho-ke uqala ngentambo encane. Phonsa iklayenti lakho isibhakela senkawu ngaphambi kokuzama ukubaphosa ngentambo enkulu.
Setha isivivinyo nabo lapho uthuthukisa khona okuthunyelwe kwebhulogi okungu-10 nge usebenzisa amagama angukhiye kahle. Thola okuthunyelwe okungu-10 lapho usezingeni lakho kepha ungabekeki kahle ngegama elingukhiye elinikeziwe. Lungiselela amagama angukhiye, uwasebenzise ezihlokweni, thola izithombe lapho ungazisebenzisa khona kumathegi ombhalo ahlukile, qiniseka ukuthi unezincazelo ezi-3 kuye kwezingu-4 embhalweni ukuthuthukisa ukuminyana kwamagama asemqoka. Gcina umkhondo wesikhathi osichitha usebenzisa lokho okuthunyelwe, linda amaviki ama-4 bese ulinganisa imiphumela kuma-analytics akho.
Setha isivivinyo lapho ubhala khona okuthunyelwe okusha kwebhulogi okungu-10 okuphoqelelayo. Sebenzisa isithombe esihle - mhlawumbe izithombe zamakhasimende noma ezinye izithombe zesitoko ezinhle, bhala izihloko ezithibela abantu ekufundeni okuningi, bese ubhala izindaba zamakhasimende noma okuthunyelwe kwezeluleko okuzosiza amakhasimende akho ngokweqiniso. Unganaki ukusetshenziswa kwamagama asemqoka… uzibe ngokuphelele. Yabelana ngomsebenzi ku-Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, StumbleUpon nanoma ikuphi lapho ungakhona. Qalisa izingxoxo ezithile. Gcina isikhathi osisebenzisayo, linda amasonto ama-4 bese ukala imiphumela kuma-analytics akho.
Ngokugxila kwikhasimende lakho nokuqukethwe esikhundleni yamagama angukhiye, ngiyaqiniseka ukuthi uzothola ukuthi inketho yesibili izodlula inketho yokuqala njalo. Angeluleki noma ngubani ukuthi ayeke ukwenza okuhle, iphuzu lami ukuthi lapho uyeka ukugxila kumakhenikhi wokusebenzisa izinjini zokusesha, esikhundleni salokho, faka umzamo wakho kokuqukethwe okuhle nokuphromotha lokho okuqukethwe - uzowina njalo!
Abakhasi nama-bots abayithengi imikhiqizo nezinsizakalo zakho, abantu bayayithenga. Uma ushintsha isitayela sakho ukuze ukhulume nesikhasi noma i-bot, uzolahlekelwa amakhasimende.
Tags: eliyisihluthuleloUkusetshenziswa kwegama elingukhiyemaile ohyeizinkawu isibhakelaukusebenzisa ngokugcwele injiniseo
Indima Entsha Yesikhulu Esiphezulu Sezobuchwepheshe Bezokumaketha